औषधि ऐन, २०३५ को संशोधन आवश्यकता | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर औषधि ऐन, २०३५ को संशोधन आवश्यकता
on: १ मंसिर २०७४, शुक्रबार ११:५६ अर्थान्तर
औषधि ऐन, २०३५ को संशोधन आवश्यकता
महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग
नारायणप्रसाद ढकालको जन्म स्याङ्जा जिल्लामा भएको हो । उनले विसं २०५८ सालमा काठमाडौं युनिभर्सिटीबाट एम फार्मेसी र २०४९ सालमा बिरला इन्ष्टिच्युट भारतबाट बी फार्मेसी गरेका हुन् । २०५२ सालमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) अधिकृत पदबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका उनी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला, औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज, स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर धनगढी, स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै २०७३ भदौबाट महानिर्देशकका रूपमा औषधि व्यवस्था विभागमा कार्यरत छन् । औषधि नियमनका विविध पक्ष निरीक्षण, कार्य विधि निर्माण, सुशासन, जवाफदेही प्रशासन र पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतासहित उनले कार्य सम्पादन करार गरी महानिर्देशकको कार्यप्रारम्भ गरेका हुन् ।
ऐन संशोधन आवश्यक
औषधि ऐन, २०३५ आजभन्दा करीब ३८ वर्षअगाडि बनेर कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यतिबेलाको समयका लागि ऐन समय सान्दर्भिक नै थियो । नेपालमा अहिले औषधिको क्षेत्र विकास हुँदै छ । औषधि व्यवस्था विभागले ऐनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको छ । ऐन कार्यान्वयनको क्रममा औषधि व्यवस्था विभागलाई सहयोग गर्न विभिन्न समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै, औषधि सल्लाहकार समिति जसले विभागलाई प्राविधिक विषयमा सल्लाह दिन्छ र औषधि परामर्श परिषद् जसले नेपाल सरकारलाई औषधिसम्बन्धी नीतिगत एवम् प्रशासनिक विषयमा सिफारिश दिन्छ ।
आजभन्दा करीब ३० वर्षअगाडि सामान्य वर्गका औषधि शतप्रतिशत नै विभिन्न मुलुकबाट आयात गरेको अवस्थाबाट आज हामी ५५ प्रतिशतमात्र आयात गर्ने अवस्था छौं । आज नेपालमा १७ हजारभन्दा बढी औषधि दर्ता भएका छन् । स्वदेशमा मात्र बनेका ८ हजारभन्दा बढी औषधिहरू छन् । त्यसरी औषधि क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुँदै छ र स्वास्थ्यमा औषधिको खर्च दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसबीचमा नयाँनयाँ औषधि आउने क्रम पनि जारी छ । औषधिमात्र नभएर विभिन्न साधन, सिरिञ्ज, कस्मेटिक गरी स्वास्थ्यका लागि नभई नहुने सामग्रीहरू बजारमा उपलब्ध छन् । यस्ता सामग्रीको प्रयोग पनि बढ्दै छ । यो पृष्ठभूमिलाई हेर्दा यो ऐनको कार्यान्वयनले मात्र नियमन प्रभावकारी हुने अवस्था छैन । विभागसँग जनशक्तिको पनि कमी रहेको छ । सङ्गठनको सुधारको आवश्यकता छ । कार्यरत जनशक्तिको नियमन, विज्ञानसम्बन्धी ज्ञान एवम् शीपमा पनि चुनौती छ । प्रविधि र कार्यरत जनशक्तिको दक्षताबीचमा रहेका अन्तरका कारण गुणस्तरीय र प्रविधिजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने कार्यमा चुनौती रहेको छ । काम गर्नुपर्ने दायरा बढ्दै छ । तर, संस्थाको संरचना भने जस्ताको तस्तै छ । औषधि व्यवस्था विभागको संरचना २०३५ सालमा जसरी थियो, अहिले पनि त्यस्तै रहेको छ । निजीक्षेत्रमा गर्नुपर्ने निरीक्षण ठूला उद्योगमा भएको उत्पादन, पैठारीको निगरानी, प्रयोग भइरहेका वस्तुको निगरानी पनि आफैमा चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन र औषधि नियमन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
विभागले कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ । संशोधनमा नियमनको दायरालाई फराकिलो बनाउने सोचलाई अगाडि बढाइएको छ । अन्य स्वास्थ्य सामग्रीलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने क्रममा छ ।
अहिले हाम्रासामु रहेका विभिन्न चुनौतीलाई सामना गर्न नीति, नियम, प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । परिमार्जित र परिष्कृत गर्न जरुरी छ । यो भयो भने मात्र हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
कानूनको औचित्य भनेको कसैको निजी स्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थलाई असर नपरोस् भन्ने हो । अब बन्ने कानून पनि त्यसैअनुरूप आउनेछ । यसको कामको दायरा पनि फराकिलो हुँदै छ । अबको समयलाई मिल्ने खालको कानून निर्माणको क्रममा छ । अहिलेको ऐनमा गलत क्रियाकलाप गर्नेको हकमा कम सजायको व्यवस्था राखिएको छ । यसको कारबाहीको दायरा पनि फराकिलो पार्न जरुरी छ । अन्य मुलुकमा भएका अभ्यासहरूलाई नयाँ बन्ने ऐनमा समेट्नुपर्छ ।
ऐनको प्रस्तावना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ
एप्पोनको अध्यक्ष नियुक्त भइसकेपछि नयाँ कार्ययोजना के ल्याउनुभएको छ ?
नेपालीलाई कसरी औषधि सुलभ मूल्यमा पुर्‍याउने भन्ने हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । हुन त हामी व्यापारी हौं । व्यापारीले त व्यापार गर्ने हो । तर, औषधि मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित भएको हुनाले पनि यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेका छौं । सरकारले आजभन्दा करीब २२ वर्षअगाडि बनाएको नीतिमा ८० प्रतिशत औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भन्ने छ । हामीले धेरै अनुसन्धान पनि गरेका छौं । भारत, चीन, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा औषधिसम्बन्धी के व्यवस्था छ भनेर स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । त्यसमा दिइएको सुझावमात्र पालना गर्ने हो भने औषधिको क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्न सक्छौं । सुझाव कार्यान्वयनमात्र गर्ने हो भने पनि अहिलेको बजारभन्दा ५/६ अर्बको बजार बढ्ने देखिन्छ । बजार बढ्दा आत्मनिर्भर हुन्छौं ।
ऐनका कुनकुन प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ र संशोधनका लागि तपाईंहरूको पहल के
२०३५ मा एउटा शाही औषधि लिमिटेड थियो । अनि एउटा प्राइभेट उद्योग थियो । यो ऐनले नेपालमा नयाँ औषधि उद्योग खुल्छ भन्ने कतै परिकल्पना गरिएको छैन । दोस्रो विषय भनेको पशु चिकित्सा, आयुर्वेदिक औषधि र होमियोप्याथिक औषधिको कल्पना गरेको छैन । औषधि ऐन, २०३५ लाई हेर्दा करीब आयात गर्न मात्र भनेर बनेको देखिन्छ । यसमा उद्योगमैत्री विषय केही पनि छैन । हामीले नयाँ ऐन बनाउने भनिरहेका छौं । तर, यसलाई संशोधनमात्र गर्ने भन्ने गरिएको छ । ऐनको प्रस्तावना नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । किनभने, अहिलेको प्रस्तावना समयानुकूल छैन । यसमा औषधिको भ्रामक प्रचार रोक्न, गलत गर्नेलाई रोक्नका लागि भन्ने वाक्यांश राखिएका छन् । कानून विकासका लागि बन्नुपर्छ । जनमानसलाई असर नगर्ने खालको औषधि आउनुपर्छ । संविधानमा पनि स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । औषधि ऐन पनि संविधानलाई अनुसरण हुने किसिमको आउनुपर्छ ।
नयाँ ऐन ल्याउनका लागि तपाईंहरूको पहल के भइरहेको छ ?
यस विषयमा हामीले करीब ६० सालबाट नयाँ ऐनको आवश्यकता भनेर पहल गरिरहेका छौं । हामी यति दरिद्र छौं कि कानून ड्राफ्ट गर्न पनि कुनै एनजीओ र आईएनजीओलाई दिन्छौं । उनीहरूको पैसा ल्याएर पाँचतारे होटलमा गएर भात खाने चलन छ । त्यसले कहिल्यै राम्रो गर्दैन । हामीले आफूलाई चाहिने कानून आफै बनाउन सक्नुपर्छ । अमेरिकामा विभिन्न औषधि हेर्ने छुट्टै प्राधिकरण बनाइएको छ । नेपालमा पनि यस्तै प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । नेपालमा कृषि, खाद्यलगायत आआफ्नै ल्याब रहेका छन् । नेपालमा यस्ता ल्याब भए तापनि यसको काम छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय र विभागले हेर्ने गरेको छ । यसले अन्तर्मन्त्रालयबीच हल्ला र बाझाबाझमात्र हुने गरेकोले यसलाई एकै ठाउँमा राखेर प्राधिकरण बनाएर प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।
साथसाथै, उद्योगमैत्री र जनमैत्री कानून आउनु पनि जरुरी छ । गुणस्तरीय वस्तु सर्वसुलभ बन्नुपर्छ । विभिन्न दफामा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । आजको खुला बजार अर्थतन्त्रअनुसार औषधि बेच्न पाउनुपर्छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हामीले व्यापार गरेर पैसा कमाउन पाउनुपर्छ । हामीले उत्पादन गरेको वस्तुको सरकारले मूल्य तोकेर हुन्छ ? हामीलाई उत्पादनमुखी कानूनको आवश्यकता छ । तर, गलत गर्नेलाई दण्डसजायको मात्रा पनि बढाउनुपर्छ । गलत गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ । हामीले कानूनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयलाई लिखित रूपमा नै दिएका छौं । त्यसमा संविधानमा बाझिने कुराहरू राखिएका छैनन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको जीएमपीको प्रावधानअनुसार नेपाली औषधिहरू उत्पादनबारे बताइदिनु न ?
यो भनेको कुशल औषधि उत्पादन गर्नु हो । साथै, औषधिको गुणस्तरको मापदण्ड पनि हो । औषधि बनाइसकेपछि यसको सही गुणस्तर भएर पास हुनुपर्छ । नेपालमा नयाँ आएका कम्पनीले पनि जीएमपी लिएको छ । नेपाल सरकारले कुशल औषधि संहिता भनेर निकालेको छ । यो पनि जीएमपीजस्तै हो । नेपालका औषधि अन्य देशको गुणस्तरको जस्तै छ ।
हामीले अहिले ४८ प्रतिशत स्वदेशी र ५२ प्रतिशत विदेशी औषधि खाइरहेका छौं । नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकमा रहेका दूतावासबाट प्रचार गरी निर्यात गर्ने बाटोलाई सहयोग गर्नुपर्छ । हामीले प्रत्येक वर्ष फर्मा स्पो गर्ने गरेका छौं । यस्ता कार्यक्रममा सरकारले विदेशी सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई पनि बोलाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
निवर्तमान अध्यक्ष, एप्पोन
औषधि ऐन, २०३५ मा मुख्य सुधार गर्नुपर्ने विषय केके हुन् ?
औषधि ऐन, २०३५ भनेको नेपालमा औषधि उद्योग नभएको बेलामा बनेको हो । त्यतिबेला उद्योग भर्खर खुल्ने क्रममा थिए । यो ऐन विदेशमा बनेका औषधिलाई नेपालभित्र ल्याउने प्रयोजनका लागि बनाइएको हो । अहिलेको समय सान्दर्भिक नभएको हुनाले यो ऐनमा थुप्प्रै ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अहिले धेरै उद्योग खुलिसकेका छन् । खुलेका नयाँ उद्योगलाई कसरी चलाउने भन्ने विषय पनि अहिलेको ऐनले समेट्न सकेको छैन । मैले यो एउटा बुँदाभन्दा पनि ऐनमा आमूल परिवर्तन नै जरुरी देखेको छु ।
केही महीनाअगाडि सरकारले औषधि ऐन, २०३५ का आधारमा केही औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । ४० वर्ष पुरानो ऐनमा टेकेर गरिएको मूल्य निर्धारण कत्तिको वैज्ञानिक देखिन्छ ?
तपाईंको प्रश्नले नै उत्तर दिइसकेको छ । अहिले समय परिवर्तन भइसकेको छ । धेरै नयाँ औषधिको अनुसन्धान भएका छन् । पहिले हात पोल्दा तातोले सेक्नुपर्छ भनिन्थ्यो भने अहिले हात पोल्दा चिसोमा राख्ने गरिन्छ । औषधिको मूल्यको सन्दर्भमा पनि जमाना परिवर्तन आइसकेको छ । सबैको हातहातमा मोबाइल छ । त्यसैबाट सबै औषधिको मूल्य थाहा पाउन सकिन्छ । अहिलेको समय भनेको विज्ञान र प्रविधिको हो । त्यससँग मिल्ने गरी विज्ञ राखेर मूल्य निर्धारण गर्न जरुरी छ । सरकारले केही महीनाअगाडि मूल्य निर्धारण गर्दा कुनैको मूल्य अनुचित रूपमा धेरै र कुनैको अनुचित रूपमा थोरै राखेको छ । यसमा समस्या उत्पन्न हुने भएको छ । यो सरकारको प्राविधिक कमजोरी हो । अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा यसरी मूल्य निर्धारण गर्न जरुरी छैन । नेपालमा भित्रिन लागेको प्रविधिलाई रोकेर मूल्य निर्धारण गरिदियो भने त्यसले देशलाई असर गर्छ । सरकारले मूल्य निर्धारण गरेपछि हामीले मान्नुपर्छ । तर, त्यो गर्नु आवश्यक थिएन ।
नेपाल औषधि उद्योग लिमिटेडलाई सरकारले चलाउन खोज्दै छ । यसमा तपाईंको विचार के छ ?
सरकारले प्लाष्टिक उद्योगलाई बन्द ग¥यो । पहिला किन खोल्न दियो त ? त्यो क्षेत्रमा सम्बन्धित ज्ञान भएका मान्छे थिएनन् ? प्लाष्टिक उद्योगलाई पनि विस्तारै कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने दूरदृष्टि किन लगाइएन ? नेपालका नीति निर्माण तहका मानिससँग कुनै भिजन छैन भन्ने यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । सरकारले विदेशमा रहेका प्रावधानलाई टेकेर नेपालको नीति बनाउन खोजेको देखिन्छ । नेपाल औषधि उद्योग लिमिटेड सरकारको उद्योग हो । त्यसमा क्षमतावान् मानिस राख्न जरुरी छ । त्यस्तो भयो भने राम्रोसँग चल्न सक्छ ।
औषधिको गुणस्तर जाँचमा समस्या देखिएको छ भन्ने आम औषधि उपभोक्ताको गुनासो छ नि ?
यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । गुनासो हुन पनि आवश्यक छ । तर, हेरेर सत्यतथ्य निकाल्नु पनि आवश्यक विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ । नेपालीको चलन चाँडै प्रतिक्रिया दिने खालको छ । नेपालमा खुला बोर्डरबाट पनि औषधि छिरेर आएको छ । सरकारले थाहा नपाईकन आएका औषधिले नेपाली उद्योग र गुणस्तरमा समेत प्रभाव पारेको छ ।
नेपाली औषधि उद्योगका बारेमा भन्ने हो भने नेपाली औषधि यहीँ छन् । हामीले आवश्यक परेको बेलामा हेर्न सक्छौं । जीएमपी लिएका उद्योग ३७ ओटा पुगिसकेका छन् । हामी स्पष्ट छौं, हाम्रा कम्पनीमा गएर हेर्न दिन्छौं । गुणस्तर नाप्ने मेशिनलाई ५० लाखभन्दा माथि पर्छ । हामीले त्यो राखेका छौं । यसरी हामी गुणस्तरमा प्रतिबद्ध छौं । सरकारले हामीसँग मिलेर काम गर्‍यो भने हामीले ३६ प्रतिशतभन्दा सस्तोमा औषधि दिन सक्छौं । सरकारले हामीसँग किनेमा स्टकिष्टलाई दिने १० प्रतिशत, रिटेलरलाई दिने १६ प्रतिशत, त्यसका साथै प्याकिङलाई दिने, मार्केटिङलाई दिने, कागज बाँड्न खर्च गर्नुपर्नेजस्तो लागत घट्छ । त्यो पैसा सबै सरकारलाई दिँदा धेरै सस्तोमा औषधि दिन सक्छौं ।
गङ्गालाल हस्पिटलले गरेको बोलकबोलमा एक जनाले एकदमै सस्तोमा औषधि दिएका थिए । त्यो औषधि भनेको विज्ञापनको प्रयोजनका लागि दिइएको हो । त्यो प्रयोजन बेग्लै भयो । कुनै पनि वस्तुलाई बनाएर दिँदा केही लागत लाग्छ । माटो नै दिँदा पनि त्यसको मूल्य पर्छ । त्यो विषय सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
भारत र बङ्गलादेश सरकारले औषधि उद्योगलाई दिएकोजस्तै सहयोग नेपाल सरकारले पनि दिन जरुरी छ । सहयोग गरेकै कारण औषधि उद्योगमा भारत अगाडि आइसकेको छ । बङ्गलादेशले ९५ प्रतिशत औषधि आफैले उत्पादन गरेर विदेशमा पनि निर्यात गर्छ । भारतलाई चाहिने ९९ प्रतिशत कच्चा पदार्थ चीनबाट ल्याउने गरिएको छ । भारतले औषधि उद्योगलाई जग्गा, पानी, बत्ती, धारा सबै सस्तो र सुलभ तरीकाले दिएको छ । उनीहरूले औषधिलाई विदेशमा लगेर बेच्नुपर्दा पनि सरकारले सहयोग गर्छ । भारतले त्यत्रो सहयोग गर्दा पनि हामीले भारतीय मूल्यमा नै नेपालमा उत्पादन भएका औषधि बेचिरहेका छौं । यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ ।
नेपालले औषधि उद्योगमा धेरै चाँडै फड्को मार्न सक्छ । बङ्गलादेश विश्वको औषधि उत्पादन गर्ने दोस्रो राष्ट्रमा आइसकेको छ । नेपालले पनि पढेलेखेका मानिसलाई यहीँ राख्न सक्छ । हामीले जीएमपी अनुसरण गर्नेबित्तिकै ४५ प्रतिशत बजार लिन सफल भयौं । सरकारले सहयोग गरेमा हामीले ८० प्रतिशत फड्को मार्न सक्छौं । नेपालमा औषधि उद्योग धेरै खुलेका छन् र अरू खुल्ने क्रममा छन् । यसलाई नियमन गर्न र निरीक्षण गर्न सजिलो होस् भन्नाका लागि उद्योग दर्ता गर्दा केही रकम डिपोजिट राख्न जरुरी छ । रामदेवले ‘स्वदेशको सामान प्रयोग गर’ भनेर स्वदेशी औषधिको विज्ञापन गर्न हुने, हाम्रो सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई सहयोग गर्न किन नहुने ?
विश्वपरिवेश सुहाउँदो ऐन आवश्यक
प्रदीपजङ्ग पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक तथा अध्यक्ष
लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालि
औषधि ऐन २०३५ अन्तरराष्ट्रिय औषधि ऐन र भारतकै औषधि ऐनको तुलनामा के फरक छ ?
औषधि विभागभन्दा औषधि कम्पनी पुरानो हो । हाम्रो कम्पनीभन्दा पुराना कम्पनी छन् । शाही औषधि लिमिटेड औषधि व्यवस्था विभागभन्दा पुरानो कम्पनी हो । औषधि कम्पनीपछि विभाग आएको हो । विभाग आए पछि नियम बनाएको हो । २०३५ सालको नियम धेरै पुरानो भइसक्यो । यो ऐन आएको मात्र ३९ वर्ष भइसकेको छ । ३९ वर्षमा औषधि कम्पनीले धेरै ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । नियम नआउनुभन्दा आउनु राम्रो हो । तर, त्यसलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । ३५ सालको ऐनअनुसार औषधि आचारसंहिता बनेको छ । औषधि कम्पनी पनि त्यसै आधारमा चलेका छन् । औषधि व्यवस्था विभागको सकारात्मक पहलकै कारण आज ५० भन्दा धेरै कम्पनी आएका हुन् । विभागको योगदानलाई नकार्न मिल्दैन । तर, कानूनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभाव विश्वभरि नै छ । त्यसैले ऐनकानून पनि विश्व परिवेशसँग सुहाउँदो बनाउन जरुरी छ । त्यसले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो पहुँच पनि राम्रो भएर जान्छ ।
के अहिलेको ऐन अन्तरराष्ट्रिय स्तरसँग अलिकति पनि मिल्दैन ?
अहिलेको कानून अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्दैन । गुणस्तरको सवालमा पनि अन्तरराष्ट्रिय कानूनसँग नेपाली कानून भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । राष्ट्रमा नभइनहुने उद्योग मध्य औषधि उद्योग पनि एक हो । औषधि उद्योगलाई अझ बढी प्रोत्साहन दिनका लागि यसको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ । नेपाली औषधि राम्रो गुणस्तरमा उत्पादन भइसकेका छन् । सरल तरीकाले गुणस्तर औषधि उत्पान गर्न औषधि ऐनले रोकेको छैन । त्यसैले नेपालमा उत्पादन भएका औषधि नेपालमा नै खपत गर्ने खालको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन भएका औषधिभन्दा फरकबाहेक अन्य विदेशी औषधिलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ ।
ऐन नयाँ बनाउने विषय कहाँ पुगेको छ ?
यो विषय अगाडि बढेको छ । नेपाल सरकारले औषधिको क्षेत्रमा परिवर्तन गरेका विषय धेरै छन् । सङ्घीय संरचनाको हकमा नयाँ व्यवस्था पनि आउने क्रममा छन् । तर, यसले राम्रोसँग प्रश्रय पाउन सकेको छैन । त्यसैले यसलाई सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यक बुँदा राख्न सकियो भने वास्तवमा परिवर्तन हुन सक्छ ।
संशोधन गर्दा कुनकुन दालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक होला ?
नेपालमा भएका औषधि उद्योग भनेको प्राथमिक प्राप्त उद्योगहरु भित्र पर्दछ । त्यसलाई अझ बढी उत्पादन बढाउन क्षमता वृद्धिका साथै नेपाली औषधिलाई प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनु पर्छ । त्यसका साथै गुणस्तरमा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्य मुलुकमा निकासीको वातावरण पनि मिलाउन जरुरी छ । हरेक देशले स्वदेशी उत्पादनका लागि सहुलिएत दिएका हुन्छन् । अहिले स्वदेशी औषधि पनि बाहिर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । हामीले हाम्रो देशमा औषधि उद्योग खोल्यौं भने यहाँका मानिसले रोजगारी पाउँछन् । उच्च स्तरका जनशक्ति हाम्रै औषधि उद्योगमा लाग्छन् । टेक्निसियनहरु र विज्ञान पढेका, मार्केटिङमा काम गर्ने उच्च तहका कर्मचारीको पनि संलग्न रहन्छ । जसले वेरोजगारीको अन्त्य गर्न सहयोग गर्दछ ।
३०/३५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका नेपाली कम्पनीले लामो फड्को मारेका छन् । अहिलेको वर्तमान समयलाई दृष्टिगत गर्दै ऐन संशोधन गर्नु जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादन खपत गर्नलाई र हाम्रो उत्पादन निर्यात गर्नलाई, हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि पनि ऐन संशोधन जरुरी छ । रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्टको क्षेत्रमा काम गर्न हामीले अहिले पनि सकेका छैनौं । त्यस्तै, ऐनले निकासी र पैठारीको व्यवस्था पनि गरेको छैन । ऐनले सहज आपूर्तिको विषयलाई मात्र समेटेको छ । त्यसैले ऐन बनाउन समय सान्दर्भिक रूपमा काम अगाडि बढाउन जरुरी छ । औषधि उद्योग प्रथमिक क्षेत्रअन्तर्गतको क्षेत्र हो । तर, पनि यसले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
आयातित औषधिले स्वदेशी कम्पनीका औषधिलाई कत्तिको प्रभाव पारेको छ ?
सबै औषधि नेपाली कम्पनीले बनाउन सक्दैन । कतिपय संवेदनशील रोग पनि हुन्छन् । विदेशी औषधिमा नयाँ नयाँ अन्वेषण पनि हुन सक्छ, तर जुन औषधि नेपालमा बन्छन् त्यस्ता चिजलाई भने बाहिरबाट ल्याउन रोक्नुपर्छ । उदाहरणका रूपमा बङ्गलादेशले आफूसँग भएको औषधि विदेशबाट ल्याउन बन्द गरेको छ । तर, नेपालको सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यस्ता विषयलाई ऐनले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपालमा उत्पादन भएको औषधि अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त जीएमपीअनुसारका छन् ?
केही कम्पनी अन्तरराष्ट्रिय जीएमपीमा गइसकेका छन्, तर केही छुटेका पनि जाने क्रममा छन् । नयाँ आउने कम्पनी जीएमपीअनुसार नै आइरहेका छन् ।